Little Mayvelous Things: လာပြန်ပြီ ဒီနှစ်ကူး
အင်းဗျ ... သွေးစပ်နေတာ ကိုက အလုပ် တစ်ခု အပိုရှိနေသလိုပဲ :P
2/09/2008 11:15:00 PM
Tin Maung Htay said...
i can't see some font in ur page. like the above comment give by "ko soe htet". i can't see it.
i have zawgyi font (latest version)
i use firefox (latest version)
အကုန်လုံးလိပ်တက်နေတာပဲ။ but i can't see clearly...
for example i can't see or type in 'j' which is ya yit in myanmar font.
can anyone/somebody/someone help me?
HELP. S.O.S. F1. GYO MIN AY.
2/10/2008 10:25:00 PM
The easiest way to view zawgyi enabled sites is to change font setting of your FF browser.
Follow the following steps in your firefox.
2. Choose Zawgyi-One for Default font under "Fonts & Colors" section.
3. Click Advanced button beside it
4. make sure Zawgyi-One is chosen in "Serif" option.
5. Uncheck/un-tick "Allow pages to choose their own fonts, instead of my selections above" option.
6. Choose "Unicode (UTF-8)" for Default Character Encoding option.
And you should be able to view all sites with zawgyi properly.
Have fun testing out.
2/10/2008 10:35:00 PM
thanks Miss Mayvelous. But i want to know why other people page display correctly and some page don't.
below is the page i can see correctly
and below is the page i can't see correctly
I want to know why i don't need to make some settings of my browser n can see these page correctly and why other page can't?
because of the font they use is not same? or something?
i want to know how can i solve these problem?
(ps: sorry for above links. i'm not doing advertising here. i just want to make sure and see these page without some changes) thanks
2/10/2008 10:50:00 PM
What I can see from KoMg's blog is that, he got EOT setup. ie. he embedded zawgyi font along with every page load.
Whereelse in your blog, there is no eot setting hence you can't see the posts properly.
It's the same for my blog. I did not set the eot so some ppl cannot view my posts unless they have the above mentioned FF setting changes.
For more info on EOT settings, please visit http://NyiLynnSeck.blogspot.com or some other mm blogs. I'm sure alot of them have written about that subject.
For me I'm just being lazy and since I can switch my browser setting easily, i don't bother adding eot for my blog.
thanks again Miss Mayvelous :)
i hope i don't waster ur time.
anyway..thanks for ur information...
see u..(aww by the way...haveasweet holidays)
2/10/2008 11:08:00 PM
ကျွန်မ နည်းနည်းလျှာရှည်ကြည့်ချင်တယ်း)
ဘာသွေးစပ်စပ်ပေါ့နော်.. တစ်စက်ပဲစပ်စပ် တစ်ဝက်ပဲစပ်စပ်
ကိုယ့်အဘိုးအဘွားရဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာကို စိတ်မ၀င်စားသူတွေက
နောက်ဆုံးမှာ ကိုယ်ဘာလူမျိုးလဲ ဆိုတာတောင် မတိအကျ မသိဘူးဖြစ်သွားတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဒီလို လူမျိုးတွေများပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်ကပေါ့။
“ကျွန်တော်တို့ တရုတ်သွေးစပ်တယ်” ဘာအမျိုးလဲ မေးရင် သူတို့မသိတော့ဘူး။
လက်ရှည်တွေ၊ လက်တိုတွေ ဖြစ်ကုန်ရော..တရုတ်သွေးတော့စပ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တရုတ်စကားမတတ်ဘူး။ ကိုယ်ဘာအမျိုးလဲ မသိဘူး။
အဲလို မသိတဲ့လူတွေကို ကျွန်မတို့က “တရုတ်ပျက်”လို့ခေါ်လိုက်တယ်။
မေဗလပ်တို့လို့ အနည်းငယ်စပ်သူတွေကိုတော့ ပြောမနေတော့ပါဘူး။ တကယ်တရုတ်သွေး
၁၀၀% ပါတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေတောင် တရုတ်စကားကို ဖြောင့်အောင် မပြောနိုင်တာရှိပါတယ်။
ဒါကတော့ နေရာဒေသနဲ့လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲသွားတာလို့ နားလည်ပေးပါတယ်။
တရုတ်ရယ်လို့မှ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာမှာလဲ ဒီလိုမျိုးအဖြစ်တွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဗမာစစ်စစ်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားရောက် လူမျိုးခြားတွေမှာ အနေကြာလာရင် ဗမာစာ၊
ဗမာစကားတောင် မေ့သွားတဲ့လူရှိသေးတာပဲ။ မြန်မာဆိုရင် ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံမို့
ဗမာစကားကို မေ့ချင်ဟန်ဆောင်သူတွေလဲ ကြုံဖူးတာပါပဲ။
ကျွန်မပြောချင်တာက ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာ ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဝင်စား စရာကောင်းတဲ့
ရိုးရာအစဉ်အလာတွေ ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီရိုးရာစဉ်လာတွေကိုလဲ နေ့တိုင်းလုပ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်နှစ်မှ တစ်ခါ၊ တစ်နှစ်မှ အလွန်ဆုံး ၃ရက်ပဲ ကျင်းပပါတယ်။ အချိန်တိုတိုလေးအတွင်းမှာ
လုပ်တဲ့ ပွဲလေးကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပါဝင်ကြည့်ပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာ ဗဟုသုတတွေ
အများကြီးတိုးပါတယ်။ လျှာအရှည်လွန်သွားရင် ဆောရီးပါ မေဗလပ်း)
2/16/2008 06:55:00 AM
လျှာရှည်တယ်လို့မယူပါဘူး။ အမပြောတာမှန်ပါတယ်။ ကိုယ့်အမျိုးမတုံးအောင် ထုံးတမ်းစဉ်လာကိုထိမ်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာလဲ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးစပ်တာတွေများနေရင်တော့ ဘယ် အမျိုးကို အတည်အမြဲယူမလဲ စဉ်းစားရမယ်ထင်တယ်နော်။
အမပြောသလိုပါပဲ ကျွန်မတို့က တရုတ်ပျက် နေတာ အဖွားခေတ်ကတည်းကပါ။ ကျွန်မအမြင်ကတော့ အဲလိုအမျိုးပျက်တခုရဲ့ အစဉ်အလာကို အထူးတလည် လိုက်ထိမ်းနေဖို့မလိုတော့သလိုပဲ လားလို့။ Concentrate on one ပေါ့နော်။ ကျွန်မကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဗမာလို့ပဲယူလို့ ဗမာအစဉ်အလာကိုပဲ တဆိုက်မက်မက်ထိမ်းချင်တော့တယ်။ ဟိုဟာလဲဟိုစပ်စပ် လိုက်လုပ၊် ဒီဟာလဲ ဒီစပ်စပ်လိုက်လုပ် နေရင်၊ ဟိုမရောက် ဒီမရောက်နဲ့ မျောက်သစ်ကိုင်းလွတ် သလိုဖြစ်နေမယ်လို့ ကျွန်မထင်လို့၊ တခုဆိုတခုပဲလုပ်ချင်တာပါ။
အင်း လူတကိုယ် စိတ်တမျိုးပေါ့နော်။ ကိုယ်အယူနဲ့ကိုယ် စိတ်ကျေနပ်မှုရှိရင်ပီးတာပါပဲ။ အားလုံးမှန်ပါတယ်။
အမြင်တမျိုးနဲ့ စဉ်းစားခွင့်ပေးတဲ့ အမ comment အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ရှင်။
learn something about Burmese Unicode
Embedding eot file in web pages and force web browsers to accept is not recommended by W3C and Firefox, Opera don't accept it.
Firefox ver3and latest Opera browsers support Graphite font which are far superior than OT and TT.
Comdr Bainirama is still the Head of State and far better than thug shwe